App-ka WISE oo lagu daray nidaam ay darawalada ku ogaan karaan isbaarooyinka Booliska… – Hagaag.com
Posted on 21 Oktoobar 2019 by Admin in Technology // 0 Comments
Maadaama Google ay sii wadayso cusbooneysiinta astaamaha App-ka WISE ee khariidadaha Google, shirkadda Mareykanka waxay ku dartay muuqaal kale oo u oggolaanaya darawaladu inay uga digayaan dabinka booliiska si ay ula socdaan xadgudubka xawaaraha.
WISE ayaa ah barnaamij ay leedahay Google oo muddo dheer ku hadaaqayey muunadan, laakiin Google ayaa u muuqata mid isku deyeysa in ay astaamaha ugu wareejiso barnaamijkeeda khariidadaha ee caanka ah, tallaabadaas oo u horseedi karta in laga maarmo si kama dambeys ah App-kii hore.
Tallaabada ka dhigaysa Khariidadaha Google mid u ekaado sidii App-ka WISE, Google wuxuu ku dhawaaqay inay bilaabeen u oggolaanshaha dadka isticmaala khariidadaha Google ee ku shaqeeya nidaamka iOS inuu u sheego shilalka, xawaaraha, iyo jidka isku xirma, dadka isticmaala nidaamyada iOS iyo Android waxay fursad u helayaan in loo sheegi doono khataraha kale ee waddooyinka, shilalka, dayactirka jidadka iyo kuwa xiran oo baabuurta ku halaabay.
Google ayaa horey ugu fasaxay isticmaaleyaasha Khariidadaha Google ee loogu talagalay Android suurtagalnimada ka warbixinta dhacdooyinka wadooyinka sida shilalka, xawaaraha iyo hakadka waddooyinka.
Dhamaan astaamaha kore waxaa lagu dhisay barnaamijka WISE, waana mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee dad badan oo adeegsada ay doorbidaan inay adeegsadaan WISE Khariidadaha Google.
In kasta oo darawallada ay u badan tahay in ay ku faraxsan yihiin cusboonaysiintaan, ayaa hadana boolisku aanu ku faraxsaneyn, kuwaas oo sannadihii ugu dambeeyay dalbaday in la baabi’iyo astaanta lagu ogaanayo meelaha booliska ay joogaan App-ka WISE.
“Waaxda Boliiska New York waxay aqoonsan tahay in barnaamijka moobiilka ee WISE uu hadda dadka u oggolaanayo inay ogaadaan meelaha isbaarooyinka u yaaliin booliska, marka waxaan Google ka codsaneynaa in laga baabi’yo shaqadan ama laga saaro App-ka WISE,” NYPD ayaa sidaasi qortay bishii Febraayo.
Google ayaa waxay had iyo jeer ugu jawaabtaa in ay faa’ido tahay in darawaladu ay yareeyaan xawaaraha, oo waxay u hogaansamaan shuruucda si adag markay ogaadaan in meel dhow booliis joogo.